Fampitahana fampisehoana eo amin'ny Galaxy S8 + sy ny Galaxy S9 + | Androidsis
Fampitahana an-tsehatra eo amin'ny Galaxy S8 + sy ny Galaxy S9 +
Ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa, benchmarks na fanandramana fampisehoana fitaovana zavatra tsy manandanja izy ireo, satria tsy dia azo inoana fa amin'ny tranga sasany, raha tsy mankafy lalao mahery vaika izy ireo dia mila ny hery rehetra azon'ny terminal omena antsika.
Na eo aza izany dia misy mpampiasa marobe izay, raha te hanome fahafaham-po ny fahalianany mitady, mitady izany karazam-baovao izany, hahitanao ohatrinona ny maodely iray nivoatra raha ny momba ilay teo alohany. Amin'ity tranga ity dia manolotra anao ny fampitahana eo amin'ny Galaxy S8 + sy ny Galaxy S9 +, izay tantanan'ny Samsung Exynos processeur, amin'ny kinova samihafa.
Fomban-drazana, finday Samsung nampangaina ho tsy nahavita asa be foana izy ireo, fotoana fohy taorian'ny nahatongavany teny an-tsena, noho ny hainganana sy ny ranon'ny fitahirizanao, fa tsy noho ny habetsahan'ny fako apetrakao miaraka amin'ilay sosona manokana. Soa ihany fa nanjavona ity laza ratsy ity tamin'ny fahatongavan'i Galaxy S6, ary rehefa nivoatra ireo kinova samihafa an'ny Galaxy S, dia notazonina hatrany io fahombiazana io rehefa nandeha ny fotoana.
Raha vantany vao namboarin'i Samsung io olan'ny fampisehoana io, dia misy dikany daholo ny hevitr'izao tontolo izao ampitahao ny zava-bita atolotry ny maodely farany nahatratra ny tsena niaraka tamin'ny processeur Samsung Exynos 9810 miaraka amin'ny Exynos 8895 izay nampiditra ny kinova Eoropeana an'ny Galaxy S8 sy S8 +. Na dia marina aza fa ny processeur roa dia novokarina tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny 10 nn, ny Exynos 8895 no taranaka voalohany ary mampiseho izany raha ampitahaina amin'ny taranaka faharoa 9810 an'ny Galaxy S9 sy S9 +.
Manolotra antsika ny Exynos 9810 an'ny Galaxy S9 sy S9 + tsy ny microprocessor vaovao ihany ary ny GPU matanjaka kokoa, fa koa noho ny fizotran'ny fanamboarana nohavaozina sy maoderina, mihatsara ny fanjifana angovo ary ny fahombiazan'ny fitaovana raha ampitahaina amin'ny S8 sy S8 + andiany voalohany, ny Exynos 8895.
Ary koa, ny Galaxy S9 +, Manolotra RAM 6 GB ho antsika izy, raha ny Galaxy S8 sy S8 + kosa dia afa-po amin'ny 4 GB, toy ny Galaxy S9. Amin'izany fomba izany, ny traikefa amin'ny fampiasana ny Galaxy S9 + dia avo lavitra noho izay hitantsika tamin'ireo teo alohany. Rehefa avy nanao fitsapana fampisehoana isan-karazany, ary araka ny nampoizina, ny Galaxy S9 + dia mihoatra lavitra ny Galaxy S8 +, ao anatin'izany ny fitsapana haingana amin'ny alàlan'ny fifandraisana WiFi, na dia tsy ho tsikaritray aza izany.
Dia avelanay ianareo rehetra fitsapana fampisehoana nataon'ireo tovolahy tao Sammobile amin'ny terminal roa, mba hahafahanao mampitahanao azy ireo. Ho an'izany nampiasa ireto rindranasa manaraka ireto: AnTuTu (Processor), Geekbench (Processor), GFXBench (GPU), 3D Mark (GPU), Basemark OS II ary Speed ​​Test (WiFi).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Fampitahana an-tsehatra eo amin'ny Galaxy S8 + sy ny Galaxy S9 +
Ny fampiharana endrika sary tsara indrindra ho an'ny Android
Samsung dia manavao mandrakariva amin'ny fampisehoana ary manome fanohanan'ny GIF amin'ny Galaxy S8 sy Note 8